IMozilla Imemezela Izingcingo Zokuqala ngeFirefox OS Yonjiniyela | Kusuka kuLinux
IMozilla imemezela izingcingo zokuqala ezineFirefox OS yabathuthukisi
IMozilla nje memezela izingcingo zokuqala ezineFirefox OS, kepha lezi zenzelwe onjiniyela abafuna ukuhlola izinhlelo zokuqala endaweni yangempela I-Firefox OS.
Into enhle ngalawa ma-mobiles ukuthi kuphela nge-HTML5 lapho singakwazi ukufinyelela kukho konke ukusebenza kwefoni, futhi, i-HTML5 ibe yindinganiso iqinisekisa ukuthi izinhlelo zokusebenza zingamapulatifomu futhi aziboshelwe kuphela kumkhiqizi noma ipulatifomu.
Izingcingo ezintsha ziphethe amagama UKeon y Peak, ibanga lokuqala maphakathi nendawo ephezulu yesibili. Zenziwa ngu I-Geeksphone ngokubambisana neTelefonica.
Iprosesa ye-Qualcomm Snapdragon S1 1Ghz
I-GSM 850/900/1800/1900 (2G EDGE)
3,5, HVGA Multitouch isibonisi
Ikhamera yangemuva eyi-3-megapixel
I-4GB ROM, i-512 MB RAM
I-MicroSD, i-Wifi N, inzwa yokukhanyisa nokusondela, i-G-Sensor, i-GPS, i-MicroUSB
1580 mAh ibhethri
Kumahhala, ungangeza noma iyiphi i-SIM
Iprosesa ye-Qualcomm Snapdragon S4 ekabili-core 1,2 Ghz
Isikrini se-4,3, qHD IPS Multitouch
Ikhamera yangemuva eyi-8-megapixel, ngaphambili okungu-2-megapixel
I-MicroSD, i-Wifi N, ukukhanyisa nenzwa yokusondela, i-G-Sensor, i-GPS, i-MicroUSB, i-Flash
1800 mAh ibhethri
Elinye iphuzu lokuhlanganisa ukuthi iMozilla iyakuhlonipha futhi ivikele ubumfihlo babasebenzisi bayo. KuFirefox OS akudingeki ukhathazeke uma inkampani yakho ikuhlola noma igcina imininingwane yakho kumaseva ayo ukuyithengisela abantu besithathu.
Kuyaziwa ukuthi lezi zingcingo zizotholakala ngenyanga kaFebhuwari, kepha amanani awakaziwa okwamanje. Kuyafaneleka ukucacisa ukuthi lawa akuwona amafoni enzelwe ukusetshenziswa ngumphakathi uwonke, lawo awakaziwa ukuthi azotholakala nini. Kwathiwa imakethe enhle izoba yiBrazil, ngoba ayikho i-Android noma i-iOS eyayilawula imakethe ye-smartphone, kodwa ngiyaphinda ngithi, kuncane okwaziwayo ngokusatshalaliswa kwesikhathi esizayo kwezingcingo eziphathwayo neFirefox OS uma uhlelo selukulungele uku-100 %.
Umbhali wale ndatshana: UJacobo Hidalgo Urbino (aka Jako) oqhamuka emphakathini abantu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » IMozilla imemezela izingcingo zokuqala ezineFirefox OS yabathuthukisi
Wayefisa ukuba nomakhalekhukhwini oneFirefox OS ... kade ngawulinda ...
Ngiyabonga ngemininingwane .. .. futhi ngiyaxolisa ukuthi anginakho ukufinyelela ku-humanOS ..
Yebo, ngisafuna ukubeka izandla zami kokuthile ngeFirefoxOS hehe.
Yebo ... kuyihlazo ukuthi i-humanOS.uci.cu itholakala kuphela kuma-IPs asuka eCuba, yimikhawulo thina noma abafana abavela ku-humanOS share, kepha ayikho enye ...
Selokhu ngaba lapha bengizibuza njalo, nenza kanjani nina bafana? Anginamahloni ngokungazi kwami. 😀
Ah kahle, elula kakhulu ... ukuthi thina (i-elav nami) sihlala eCuba, njengoba sihlala lapha ngoba ama-IP ethu avela eCuba, ngakho-ke sivunyelwe ukufinyelela kuma-humanOS.
Njengoba okuningi kwalokho abakushicilelayo kujabulisa ngempela, yingakho sithatha iminikelo yabo eminingi bese sabelana ngayo lapha, ukuze i-inthanethi iyifunde.
Cha, ngiqonde ukuthi singababona kanjani?
Hhayi-ke, umuntu walapha eCuba onamaseva anama-IP wangempela (okungukuthi, phambi kwe-inthanethi) kuzodingeka enze umfanekiso wesayithi futhi awukhombise kuwo wonke umuntu oku-intanethi, okuyinto engenakwenzeka ngoba ukuba ne-hardware enjalo akuvamile.
Enye indlela umuntu ofanayo, iseva lapha eCuba kodwa ene-intanethi, obavumela ukuba baxhumane neseva ngeSSH bese bezulazula besebenzisa i-SOCKS5 futhi bafinyelele kusayithi, ongayifaka ngoba uzoba ne-IP evela eCuba (i-IP kusuka kuseva).
Kunoma ikuphi, mancane kakhulu amathuba okuthi sikwazi ukukufeza 🙁
Hehe, cha mfowethu, sikubona kanjani konke lokhu? ukuvakashela i-Fromlinux? Kunalokho, uzibonakalisa kanjani? Uxolo uma ngingazichazanga kahle 🙂
AAHHH !!!! Manje yebo 😀
Akunalutho, i-SinceLinux nje ayikho kuseva eCuba, ilula kanjalo 🙂
Yiseva elawulwa izinqubomgomo zethu (lezo zeDesdeLinux), hhayi lezo zabaqondisi noma izikhulu zanoma imuphi uhulumeni 🙂
Ahaha, ngiyabonga ngempendulo. Imvamisa impendulo ihlala ilula kakhulu. Sanibonani ... 😀
hahahaha kahle yebo, kwagcina sekuyi-LOL elula kunazo zonke !!
Kuzoba nokudluliswa kweTor, noma i-ssh yabafana!
"Bazo" kusho mina, isilo esinjani! XD
… Ukuhlola ukwesekwa kwe-ElementaryOS yesayithi.
Lutho, kumane kungeza ukuxhaswa kokutholwa kwe-ElementaryOS kumazwana nakuwijethi yewijethi
UFernando A. kusho
Ngiyethemba, Ubuntu OS.
Phendula uFernando A.
Iqiniso ukuthi Ubuntu bezimoto ezithembekile bathembisa izinto eziningi maqondana nokuqanjwa okusha nentuthuko ...
Njengoba kunjalo, futhi uma ukuvumelana kuyikho abakuthembisayo, siyi-ssh eyodwa ekuxhumekeni ne-smartphone yethu ngokusebenzisa ikhonsoli yokuthola kahle amaphakheji esiwafunayo.
Ngiyethemba ukuthi ngingawufaka isithombe ku-Galaxy S yami, ngikhathazeke kakhulu nge-sooo
Ngiphupha usuku engizofaka ngalo ubuntu ubuntu noma i-firefox os efonini yami ngoba ngilwa kakhulu ne-android
Angazi ukuthi kungani, kepha Ubuntu Ifoni noma iFirefoxOS ayinginaki, futhi ngizama cishe noma yini engifumanayo: /
ILibreOffice 4.0 izothuthuka ekubukekeni nasekusebenzeni kwayo